Nahenan’ny fitsarana saodiana ny sazin’ny dokotera malaza nohazonina hatramin’ny taona 2017 · Global Voices teny Malagasy
Nahenan'ny fitsarana saodiana ny sazin'ny dokotera malaza nohazonina hatramin'ny taona 2017
Nosaziana noho ny heviny ilay Saodiana-Etazonia Walid Fitaihi
MpanoratraHakim Abou Marwane
Voadika ny 11 Febroary 2021 5:17 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Română , Italiano, Ελληνικά, عربي, Français, English
Sarin'ny mpanolotra TV malaza sady farmasianina Dr. Walid Fitaihi, avy ao amin'ny kaontiny Facebook.
Rehefa nigadra telo taona, voarara tsy mahazo mandehandeha, sy nampijaliana, dia nahatratra ny azo lazaina hoe tonga amin'ny dingana tsara fiafara ihany vao haingana ny raharahan'ilay Amerikano-Saodiana farmasianina sady mpanolotra fandaharana amin'ny TV, ny Dr. Walid Fitaihi, vokatry ny fiovan'ny fitsokan'ny rivotra tao Washington izay niafara tamin'ny fahaverezan'i Riyadh ny mpiara-dia aminy iray matanjaka ao amin'ny Trano Fotsy (White House).
Tamin'ny Janoary, efa nataon'ny fitsarana ambony saodiana ho maty sasaka ny didim-pitsarana tany amboaloany enin-taona izay nitazonana farmasiana nianatra tao Harvard tamin'ny desambra tamin'ny fiampangana maro, ka ao anatin'izany “ny famahana ny tenim-pankatoavana ny mpanapaka sy ny finamanana tamin'ny fikambanana mpampihorohoro,” “fanimbazimbana firenenkafa sy ny mpitarika azy ireny,” ary “fakana zom-pirenena vahiny [U.S.] tsy nisy fierana tamin'ny manampahefana Saodiana”.
Naaton'ny fitsarana ihany koa ny ambin-tsaziny, araka ny tatitry ny Reuters, izay midika fa tsy hamita ny fanagadrana azy izy. Nahena ho 38 volana ihany koa ny fandrarana tsy fahazoan'ny Dr. Fitaihi mivezivezy mandritra ny enim-bolana tamin'ny desambra.
Nosamborina ity mpanentana malaza ity taorian'ny fanehoan-kevitra nataony tao amin'ny Twitter mamely fanjakana arabo hafa sy ny mpitarika (mpitondra ) azy ireny.
Nohazonina i Fitaihi tamin'ny Novambra 2017 nandritra ny andiam-pisamborana nobaikoan'ny printsy saodiana Mohamed bin Salman noho ny kolikoly, izay nahatrarana ankohonan'ny mpanjaka sy mpandraharaha izay niteraka fanamelohana manerantany. Nohazonina nandritra ny 21 volana tsy nisy fitsarana na vesatra fiampangana ilay farmasianina sady nampijaliana. Noraràna tsy mahazo mandehandeha ihany koa ny mpikambana fito ao amin'ny fianakaviany mandritra izany fotoana izany.
Izao fahatontosan'ny raharaha momba azy izao dia tonga niaraka tamin'ny raharaha teratanin'i Etazonia roa hafa izay nahitam-baliny tampoka sy haingana koa.
On Thursday, the State Department said the kingdom had conditionally released two dual Saudi-U.S. citizens detained in a crackdown on civil society there, and reduced a sentence for a third, Dr. Walid Fitaihi, convicted of “disobedience” to the government.
— Ellen Knickmeyer (@EllenKnickmeyer) February 5, 2021
Tamin'ny alakamisy, nilaza ny departemantam-panjakana fa namotsotra araham-pepetra olona roa mizaka zom-pirenena Saodiana-Etazonia nohazonina nandritra ny famoretana ireo firaisamonim-pirenena ny fanjakana [saodiana], ary nanamaivana ny heloka natao tamin'ny fahatelo, Dr. Walid Fitaihi, voampanga ho “maditra” amin'ny governemanta.
Andro maromaro taorian'ny didin'ny fitsarana ambony nampihena ny sazy, dia nahazo loka manandanja ny foibem-pitsaboan'ny Dr. Walid Fitaihi, nahatonga esoeso sy saritaka tao amin'ny media sosialy.
Nanoratra i Ma’n Asharif, Saodiana manana mpanjohy mihoatra ny 6.400:
قصة #وليد_فتيحي :
-نوفمبر 2017: تم اعتقاله وتعذيبه لقرابة 21 شهر
(خلال هذه الفترة تم نشر مقاطع تخوينية عديدة ضده من الوطنجية)
-اغسطس 2019: تم الإفراج عنه مؤقتاً والمحاكمة مستمرة
– 9 ديسمبر 2020 : حكم بالسجن 6 سنوات
– 18 يناير 2021 : الغاء الحكم و التكريم بجائزة
عش رجبا ترى عجبا https://t.co/EHs1Vbf5v3
— معن الشريف (موشو) Mosho (@Mosho_NZ) January 18, 2021
- Novambra 2017: Nosamborina sy nampijaliana nandritra ny 21 volana latsaka kely izy
- Aogositra 2019: Navotsotra vonjimaika izy, ary mitohy ny fitsarana
- 9 Desambra 2020: Voaheloka higadra 6 taona any am-ponja
- 18 Janoary 2021: Didy fanafoanana sy fahazoana loka
Samia ho ela velona dia hahita fahagagana ianareo.
Nanome setriny am-pivazivaziana ny Saodiana iray hafa, Omar Ben Abd Al Aziz :
انا اخاف انام واصحى القى الدكتور فتيحي وزير الصحة .. على مهلك ياحكومة بليز
— عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) January 18, 2021
Matahotra aho ny hatory ary hifoha avy eo. Avy eo misy Dr. Fitaihi, izay lasa minisitry ny fahasalamana… O’ Governemanta, raiso mora izany, azafady!
Tao anatin'ny volana vitsivitsy, indrindra mialoha sy taorian'ny nifidianana an'i Joe Biden ho filohan'i Etazonia, nisy fivoarana tsara ny raharahan'ireo Saodiana maro migadra nahazo fangorahana manerantany fa tsy noraharahian'ny fitantanam-panjakana Trump.
Heverina ho avotsotra amin'ny volana marsa i Loujain Al Hathloul, vehivavy mpikatroka mpandala ny zon'olombelona, rehefa nandidy azy higadra ho enin-taona ny fitsarana tamin'ny desambra, ambany noho ny figadrana faratampony mahatratra 20 taona nangatahan'ny fampanoavana. Efa namita ny ankamaroan'ny sazy tamin'ny alalan'ny fihazonana alohan'ny fotoam-pitsarana i Hathloul.
Vao haingana kokoa, navadika ho figadrana [folo taona an-tranomaizina] tamin'ny 7 febroary ny fanamelohana ho faty nodidiana tamin'ny tanora tsy ampy taona telo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Shiita.
Mbola mifonja ny maro amin'ireo gadra hafa, gadra noho ny nanehoany hevitra mifandona amin'ny fitarihana Saodiana, ka ao anatin'izany ireo mpitondra fivavahana miavaka toa an'i Salman al-Odah, Abd Al Aziz At Tarifi, Awad al Qarni, Omar Al Muqbil.
Izao fivoarana tsara izay dia mifandraika amin'ny fitondram-panjakana vaovao ao Etazonia, izay nampanantena fa hanombana indray ny fifamatorany amin'ireo fitondrana tsirefesi-mandidy ao amin'ny faritra, izay efa nanapaka ny fanohanana sy ny fivarotana fitaovam-piadiana ho an'ilay fitondram-panjaka manankarena solika manoloana ny ra mandriaka amin'ny ady ao Yemen izay miafara amin'ny krizy mahaolona.
Maro ireo mpanara-baovao no mihevitra fa izao raharaha ara-pitsarana mifarana haingana dia haingana mahaliana an'i Washington izao dia ny mba isorohana ireny ho “fitaovana enti-miady varotra” satria efa mihagoragora ny fifandraisana ao amin'ireo mpiara-dia hatry ny ela ireto.
Arabia Saodita 2 herinandro izay
Israely 2 herinandro izay